Sakany fampiharana: kebab hena, trondro, akoho iray manontolo, ranjon'akoho, tofu, voadio, paty, hena hena, paty frantsay, poti-ovy, voanjo, tsaramaso, legioma sns.
4. Heating karazana: propane ranoka (LPG), herinaratra;
6.Basket afaka miolakolaka, lavaka harato no hanivana ny ankamaroan'ny menaka;
Ny fifehezana ny mari-pana 1.Automatika, apetraho ny mari-pana ilaina, ny mpanara-maso ny mari-pana dia hanitsy avy hatrany arakaraka ny mari-pana tena misy ny solika, tsy mila tanana. Ny fepetra teknika ho an'ny mpiasa dia tsy avo sy manitatra ny fampiasana ny fotoana misy solika, mitahiry be dia be.
2.Atomatika fisarahana solika residual, mandeha ho azy filtration: tsy mila manadio ny diloilo ao am-bilany, mivantana avy any ambanin'ny fanendasa, tsy mila hamoaka ny menaka rehetra. Mitsitsia fotoana sy ezaka, ary mitahiry faritra nendasina, tsy misy mila manadio imbetsaka isan'andro. Afaka manendasa karazan-tsakafo endasina rehetra, afaka mahandro sakafo mahandro rehetra
3. Fanapahana herinaratra aorian'ny fanendasana, fanaraha-maso ny bokotra, hivoaka ho azy ny boaty sakafo rehetra. Misy hopper etsy ambany, ary latsaka ao anaty fitoeram-bokatra ny sakafo.
4.Energy fitsitsiana, ny fantsom-pamokarana fryer eo afovoan'ny menaka, ka tsy misy toerana handaniany hafanana, ampiasaina hanafana ny hafanan'ny solika avokoa izy ireo. Raha ampitahaina amin'ny vina nentim-paharazana dia afaka mamonjy mihoatra ny 65% ​​amin'ny fandoroana arintany
Teo aloha: Tono mifangaro
Manaraka: Colloid Mill